Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Politika tamin’ny Desambra 2011
Politika · Desambra, 2011
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Desambra, 2011
22 Desambra 2011
19 Desambra 2011
Navotsotra ny alina teo ilay Siriana bilaogera, taorian'ny nandanianty 15 andro tany am-ponja Siriana. Ghazzawi, izay manoratra bilaogy avy ao Syria eo ambanin'ny tena anarany marina , dia nosamborina tany amin'ny sisintany manasaraka an'i Syria sy Jordania, raha iny izy an-dàlana hanatrika atrikasa momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety hatao...
18 Desambra 2011
Fihetsiketsehana vao haingana manohitra ny fahapotehan'ny tontolo iainana noho ny fitrandrahanana harena an-kibon'ny tany ao Però no nitarika ny fampiasana fitaovam-pahalalam-baovao marobe, tamin'ny alalan'ny fanentanana sy famoahana lahatsary nalain'ny olom-pirenena nandritra ny hetsika, ahitana ny fahamaizana niseho sy ny sisa maro hafa izany. Manampy amin'ny fahazoana mazava tsara ny zava-misy mikasika...
Tontolo Arabo: Arahabaina i Tonizia!
Ilay mpitolona ho an'ny zon'olombelona, Moncef Marzoiki, 66 taona, no voafidy ho filoha vonjimaika hitantana an'i Tonizia nanomboka ny 13 desambra. Mpanohitra izy ary nogadraina sy natao sesintany nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Zeine El Abidine Ben Ali, hitondra an'i Tonizia izy mandram-pandrafitra ny lalàm-panorenana vaovao, sy ny fifidianana...
15 Desambra 2011
Nisaonana nanerana ny firenena ny fahafatesana vao tsy ela an'' i Nusrat Bhutto, vehivavy voalohany ary koa vadin'i Zulfiqar Ali Bhutto. Nambara tamin'ny fomba ofisialy fa andro tsy iasana izany mba ho mariky ny fisaonana , izay niteraka onjana fihetseham-po teo amin'ny mpisera Twitter manontany ny tena hevitra ambadik'ity hetsika...
14 Desambra 2011
Tanzania: Mibilaogy sy Mibitsika ny Tanzania@50
Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny taniben'ny Repoblika Mitambatr'i Tanzania, Tanganyika, dia feno 50 taona. Aty anaty aterineto, mankalaza izany ireo bilaogera sy mpandefa bitsika sady misaintsaina izay hoavin'i Tanzania.